Sida loo kordhiyo kaydinta iPad-kaaga
Ma u baahan tahay meel ka badan iPad? Dhib ma laha!
Haddii ay jirto hal faa'iido weyn oo ku habboon nolosha iPad-ka, waa la'aanta hab fudud oo lagu balaadhinayo kaydintaada. IPad ma taageere kaararka Micro SD, oo aan lahayn dukumiintiga dhabta ah ee USB (ama xitaa nidaamka faylalka dhabta ah), ma aha inaad ku rakibtid kaliya qalabka wax lagu duubo. Maalmihii hore, 16 GB wuxuu ahaa mid kayd badan, gaar ahaan haddii aadan u baahneyn inaad ku ururiso filinkaaga oo dhan iPad-ka, laakiin sida iPadku u helo awood badan, barnaamijyada ayaa sii weynaaday. Xaqiiqdii, ciyaaraha qaar ayaa iminka la socda calaamadda 2 GB. Sidaad ku heli kartaa kayd dheeraad ah?
Xaqiiqada nasiib-darradu waa inaysan jirin habka loo kordhiyo kaydinta barnaamijyada. Laakiin waxaad sii kordhin kartaa kaydinta wixii ku saabsan waxkasta oo kale, kaas oo ka baxaya qolal badan oo loogu talagalay barnaamijyadaada, gaar ahaan haddii aadan iPad-ka u isticmaalin konsalkeeda. Cayaartooyadu waa farqiga ugu weyn ee dukaanka app, laakiin barnaamijyada kale ayaa hubaal ah inay heli karaan faqiir.
Kaydinta daruurtu waa hab weyn oo lagu kaydiyo dukumiintiyada, sawirada, iyo fiidiyoowga. IPadgu wuxuu la yimaadaa iCloud Drive iyo Library IQar, laakiin maaha mid aad u macquul ah sida xalalka kale. Talada ugu wacan waa inaad u guurto adeeg sida Dropbox ama Google Drive.
Kaydinta daruurtu waxay internetka u isticmaashaa darawal labaad oo adag. Inkastoo "Cloud" uu mararka qaarkood u eg yahay meel qarsoodi ah, xusuusnow, internetka oo dhan waa dhab ahaan kumbuyuutar isku xiran. Asal ahaan, kaydinta daruurtu waxay adeegsaneysaa meel ku keydinta meel adag oo ka jirta meel dibedeeda ah sida Google ama Dropbox si aad u hesho baahidaada kaydka. Xalalka qashin-kaydinta badankoodu waxay sidoo kale bixiyaan meel bannaan oo lacag la'aan ah si ay kaaga caawiso inaad bilowdo.
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan kaydinta daruurtu waa inay tahay aafo. Wax kasta oo ay ku dhacaan iPad-kaaga, waxaad weli haysataa faylal kasta oo loo wareejiyo daruuraha. Sidaas darteed waxaad lumin kartaa iPad-kaaga oo wali haysan faylashaada. Tani waa sababta iCloud ay u sameysey meesha ugu haboon ee sida ugu haboon iyo sababta adeegyada daruuriga ah ay u sameeyaan hab weyn oo lagu balaadhiyo kaydintaada.
Isticmaalka ugu fiican ee kaydinta daruurtu waa sawiro iyo gaar ahaan fiidiyoow. Waxay qaadan karaan meel aad u yaab leh oo bannaan, sidaas darteed si fudud oo loo nadiifiyo ururinta sawiradaada oo aad u guurto daruuraha waxay ku dhamaan kartaa in la sii daayo qashin qub ah.
Iskuulkaaga Muusikada iyo Filimada
Muusikada iyo filimadu waxay sidoo kale ka qaadi karaan meelo badan oo ka mid ah iPad-kaaga, taas oo ah sababta ay u fiicantahay inaad ku qulqulato meeshii aad ku kaydin lahayd. Haddii aad leedahay filim digital ah oo ku yaala iTunes, waxaad si toos ah ugu dhigi kartaa iPad-ka adiga oo isticmaalaya barnaamijyada fiidiyowga iyaga oo aan soo dajin. Tani waa run oo leh adeegyo badan oo fiidiyooga ah sida Amazon Instant Video.
Waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay soo-ururinta muusigaaga. Xalka ugu fudud ayaa ah in la iska diiwaan geliyo iTunes Match, kaas oo falanqeyn doona ururintaada iTunes wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad ku soo daadiso dhammaan muusikada dhammaan qalabkaaga iOS. Tani waxaa ka mid ah muusikada aadan ka iibin iTunes. Sida loo leexiyo iTunes Match
Adeegga iTunes waa $ 24.99 sanadkii, taas oo ah wax xadidaysa waxa ay bixiso, laakiin haddii aadan qorsheyneyn inaad guriga ka baxdo iPad-kaaga, waxaa jira hab bilaash ah oo aad ku sameeyn karto isku mid ah: wadaagidda guriga . Qalabka wadaagista guryaha wuxuu u isticmaalaa kombuyuutarkaaga keydinta iyo dariiqa muusikada iyo filimada labada iPad.
Waxaad sidoo kale qori kartaa adeegga rukunka sida Apple Music, Spotify ama Amazon Prime Music. Tani maaha kaliya inaad u ogolaato inaad miyuusigga udheesho iPad-ka, laakiin sidoo kale waxay ku siinaysaa inaad hesho maktabadda oo dhan muusikada si la mid ah Netflix ay ku siinayso maktabadda filimada.
Ha iloobin Pandora. In kastoo aadan dooran karin heeso gaar ah oo aad ku ciyaari karto, waxaad samayn kartaa xarun raadiyaha caadada ah adigoo ku dhexjiraya fannaaniinta aad jeceshahay. Tani waxay ku siin doontaa heeso isku mid ah oo kaa caawinaya inaad hesho muusig cusub.
Dareewal Dibedda ah
Habka ugu dhaqsaha badan ee lagu kaydiyo kaydinta waa in si fudud loogu daro wadajir kale oo adag. Hase yeeshee, iPad-yada ayaa ku adkaata iyada oo aan la shaqeyneynin wadooyinka caadiga ah ee USB-ga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro ka mid ah wadooyinka adag ee dibadda ah oo ay ku jiraan adreeska Wi-Fi si ay iPad-ku ula xiriirto iyaga oo u maraya xiriir la hubo Wi-Fi. Dareemayaashani waxay noqon karaan hab weyn oo ay kuugu siiyaan iPad-kaaga dhamaan warbaahintaada oo dhan haddii aad ku jirto guriga ama meel ka fog guriga. Iyo inta badan wadatashiyadan waxay taageertaa soo-dejinta sawirrada, fiidiyoowga, iyo dukumiintiyada, sidaa darteed waxaad ka saari kartaa bannaanka iPad-kaaga adigoo keydinaya meel bannaan oo aanad miisaan u lahayn dhamaan muusikada iyo filimadaaga.
Markaad ka soo qaadayso dariiq adag oo adag , waa muhiim inaad hubiso in iPad la shaqeyso. Dareemayaashan waxaa ku jiri doona app bilaash ah oo u oggolaanaya iPad inuu la xiriiro wadada dibadda.
Ka feker dariiqyada Flash ma shaqeeyaan iPad? Mar labaad u fikir. Inkastoo aanad si fudud ugu dhejin karin qalabka iPad-ga iPad-ka iyo adigoo isticmaalaya xirmo u dhexeeya sida qalabka xirmooyinka kamaradku ma shaqeynayo, shirkadaha sida AirStash ayaa abuuray xal u adeegsanaya Wi-Fi si la mid ah qaar ka mid ah wadada dibadda . Kombuyuutaradani ma aha kuwo qalab lagu kaydiyo; waxaad weli u baahan doontaa inaad iibsato kaar SD ah. Laakiin farqiga u dhaxeeya qalabixiyayaashan waxay kuu ogolaaneysaa inaad iibsato dareemayaal badan oo Flash ah, oo qeexaya xaddiga booska baahiyahaaga. Waxay sidoo kale u oggolaanayaan in si sahlan loo wareejiyo dokumentiyada kala duwan ee kombiyuutarada kala duwan meelo badan, sidaa darteed waxay ku haboonaan karaan xal ganacsi.
Sida loo abuuro Jadwalka Excel ee iPad
Sida loo Isticmaalayo buugaag ee Safka Browser ee iPad-ka
Sida loo soo daayo Amazon Video on Apple TV adigoo isticmaalaya iPad
Sida Loo-keydiyo Website-ga Qiimaha Guriga ee iPad-kaaga
Sida loo soo dajiyo sawirrada iPad-ka
Sida Loo Abaabulo Dhismayaasha iPad-ga
Sidee loo hagaajiyaa Kamaradda iPad-ka
Cunsurrada ugu badan ee iPad iyo sida looga fogaado
Ku rakib Fala Sawir Sawirada Sawirada
HP Scanjet Enterprise Flow Scan 5000 s2 Scanner-Feed Scanner
Muuqaal Muuqaal Video ah - Waxa aad u Baahan Tahay Inaad Ogaato
Baro Waxyaabaha Kumbuyuutarka ee ku yaala OS X Mail
Tilmaamahaaga Sawirada Wearable
Qiimaha QoS ee Shabakadaha Computer
Su'aalaha iyo Jawaabaha Caadiga ah ee OSI Network Model
Intee ayey ku xirantahay internetka?
My Way Mail - Adeegga Boostada Lacag-la'aanta ah
Waa maxay sababta Internet Explorer oo kale loo rogay?
Sida Loo Dhigo Sawir Lagu Sameeyo Xaqiiqda Qoraalka
Sida loo Bedelayo Goobaha Muuqaalkaaga Instagram
Habka ugu Wanaagsan ee Fariimaha Calaamadaysan ee Loogu Taabanayo iPhone
Fanaanada Hacker Waxaynu og nahay iyo Jacayl
Sida loo helo dhammaan fariimaha aan la Ogayn ee Yahoo! Boostada
Sida loo Isticmaalayo Qalabka Abuuraha ah ee Garmin Connect
Noocyada Barnaamijka 'SoundingBoard AAC App' ee AbleNet
Raadinta Moobaylka iyo Qalabka Raadinta
Baro Habka Saxda ah ee Loo Yeelo Email Gmail Gmail
Sida Loogu Arko Yahoo Yahoo
20 Tilmaamaha Kacsan ee Termpberry Pi Talooyin Ku Saabsan Bilowga
"Looma ogola inay ku biiraan guuldarada shabakada (qalad -3)" on the iPhone